Saxilnews.COM SADDEXDDA MAAN LAAWE XADHIGA LA SOO GUDAY W/Q BOQOR BADMADAW | Saxil News Network
Saxilnews.COM SADDEXDDA MAAN LAAWE XADHIGA LA SOO GUDAY W/Q BOQOR BADMADAW
May 4, 2016 - Written by cali abdilaahi
Saddexdda maan laawe waxaay kala yihiin shirkadda Telesom oo ixtiraami weeyday wixii ninka walaal koodda uu kaga guuleestay (Somcable) shan sano ka hor risiq xaasid-nimo weeyi inaad u ogolaan waxaad naftaadda la jeceshahay in uu walaal ka hello,imaan la’aan darteed ayaay doonen wixii aay barlamanka somaliland an saxiyey inaay jabiyaan.
Maan laawaha labaad waa wasiirki amarka madax-weynaha qaadan waayey oo sharciggi ugga dul talaab saday iyo amarki madax-weynaha imaan la’aan darteed oo dhinac Telesom u raacay.
Maan laawaha Saddexaad waxa weeyi Taliyihi Ciidanka badda ee xilka loogga qaaday inuu ilaalin waayay dalka waxa soo galaya diidayna amarka madax-weynaha inuu joojiyo markabka sahaminta wadey.
Maan laawaha kowaad oo telesom ahi maxaay xiligan isugu dayeen inaay cable keenaan,ma dowladda ayaan soo labanaayn ayaay is idhaahden,teedda kale telesom labadda maan laawe kale maxaay u adeeg sadeen ma waxaay ogaaden inaanay ahayn beesha dhaxe ee somaliland iyo reer Selel.
Hadaba Saddexdda maan laawe madax-weynuhu labu umadda ka qabtay midna wuu yarra hakiyey oo Telesom ah maanlaawaha ugu weyn oo Telesom ah waa in shacabka somaliland aay isku raacan sidaay iskaga qaban lahayen.
Sheekh reer Uganda ah oo loo aqal geeyay nin halkii uu gabar ka sugayay
CAR HADASHII MAANAY DHAMAAN HORTA